အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ဇူလိုင်လအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ်လ ၁၆ရက်နေ့ ၂၁:၀၀MT အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။.
Fedသည် ကမ္ဘာ့ဗဟိုဘဏ်များထဲတွင် အရေးပါဆုံးသော ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေက Forexဈေးကွက်အတွင်း အဓိကကျတဲ့ငွေကြေးအတွဲတွေကို ကြိုးကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတာဖြစ်ပါသည်.
ယခင်လFedဆွေးနွေးပွဲတွင် ထုတ်ပြန်ချက်သာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ. ဈေးကွက်ကတော့ အမေရိကန်စီးပွားရေးအပေါ် မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ နောက်ထပ်ဘယ်လိုမူဝါဒတွေကို သဘောကျနေလဲဆိုတာကိုပါ သိချင်နေကြတာဖြစ်ပါသည်. ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် FEDအတိုးနှုန်းတင်ဖို့ hawkishလေသံမာခဲ့ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး အားကောင်းနိုင်ပါသည်. လေသံပျော့ခဲ့ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်.